श्रीमानले श्रीमती लाई जि*उदै ज*लाए, डेढ बर्षको बच्चाको बिच*ल्ली (भिडियो हेर्नुहोस ) – " कञ्चनजंगा News "
श्रीमानले श्रीमती लाई जि*उदै ज*लाए, डेढ बर्षको बच्चाको बिच*ल्ली (भिडियो हेर्नुहोस )
No Comments on श्रीमानले श्रीमती लाई जि*उदै ज*लाए, डेढ बर्षको बच्चाको बिच*ल्ली (भिडियो हेर्नुहोस )
केहि बर्ष अघि मात्र बिहे गरेकी श्रीमती भावनाको श्रीमानका कारण यसरि भयो दुखद निधन !
शिखर नगरपालिकाकी एक महिलाको आ गो लगाएर ह त्या गरेको आरोप लागेको छ । जिल्लाको शिखर नगरपालिका वडा नं ४ मुडभराकी २६ वर्षीया भावना भट्टको आगो लगाएर ह त्या गरेको माइती पक्षले दोषारोपण गरेको हो । उहाँका परिवारकै सदस्यले पे’ट्रोलि’यम प’दार्थ छ’र्किँदै आ’गो लगाएर यस्तो कार्य गरेको भावनाका दाइ शालिग्राम भट्टले आरोप लगाउनुभयो । यस घटनामा उहाँका श्रीमान् मीनराज शर्माकै संग्लनता रहेको भट्टको जिकिर छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कुनै उजुरी तथा जानकारी नआएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घटनाबारे कुनै जानकारी र उजुरी आएको छैन, उजुरी आएपछि प्रहरीले आफ्नो काम थाल्ने छ ।”
शरीरमा आ गो लागेपछि यही मङ्सिर ७ गते गम्भीर घाइते भएकी भावनालाई उपचारका लागि डोटीकै सुजङ अस्पतालमा पु¥याइएको थियो । उक्त अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि उहाँलाई सेती पहिले प्रादेशिक अस्पताल कैलाली र पछि भारतको बरेली लगिएको थियो ।
बरेली अस्पतालले उहाँको स्वास्थ्यावस्थामा सुधार भएको भन्दै घर पठाए पनि घरमा ल्याउँदा उहाँको निधन भएको थियो । भावना र शर्माबीच दुई वर्षअघि मात्रै विवाह भएको उहाँको घरपरिवारले जनाएको छ ।
त्यस्तै आफ्नै श्रीमानले म’ट्टी’तेल छ’र्केर ‘जि’उँ’दै ज’ला’एपछि ११ दिनको उपचार पछि एक महिलाको ज्या’न गएको छ । उनको एक वर्ष पनि नपुगेको बालक छोरा छ । आमाको निधन पछि बालकको विचल्ली भएको छ । उनीहरुको सम्बन्ध केही समय यता राम्रो थिएन । उनी अनमीको परिक्षा दिन आफ्नी बहिनीसंग राजपुर गएकी थिइन् । राजपुरमा आफन्तको घरमा बसेर परिक्षा दिन लागेको बेलामा श्रीमानले फोन गरे । तर उनले म तिमीसंग बस्न सक्दिन ।
तिमीसंग बस्नु भन्दा बरु सेती नदिमा हा’मफा’लेर म’र्छु भन्थि, युवतीको बहिनीले भनिन्, भिनाजु दिदी भन्दा धेरै जेठो थियो । उसको त दिदी भन्दा जेठा थिए । त्यही भएर दिदीले उ संग विवाह गर्न नै चाहेकी थिइन । तर पछि दिदी ति युवकसंग कसरी नजिकिइ आफुलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ । केटाले ज’बर’ज’स्ती गरेर विवाह गरेको कुरा पछि खेलेको बताइन् । त्यो पुरुषको श्रीमतीले नै उनलाई ज’बर’ज’स्ती विवाह गर्न लगाएको बहिनीको भनाई छ । सात वटा छोरी जन्मदा पनि छोरा नभएपछि दुर्गाले नै आफ्नो श्रीमानलाई ज’बर’ज’स्ती विवाह गर्न लगाएको वहिनीको भनाई छ । भाउजुको भाई नाता पर्ने भिनाजुले विवाह अघि नै यौन सम्पर्क राखेर पेटमा बच्चा भइसकेको बहिनीले बताइन् । अहिले उनको छोरा जन्मेको छ । निधन हुँदा पनि दिदीको पेटमा तीन महिनाको बच्चा थियो ।
सौता माथि विवाह गरेका कारण माइतीले पनि उनलाई राम्रो मानेका थिएनन् । विवाह गरेर गएपछि माइतीले केही वर्ष वास्ता गर्न छोडे । दुई वर्ष उनीहरु सम्बन्धमा रहँदा माइतिले वास्ता गर्न छोडेका थिए । उमेरले निकै जेठो, सौता र छोराछोरी समेत भएको ब्यक्तिसंग विवाह गरेका कारण माइति टाढिएका हुन् । विवाह पछि पनि भिनाजु जेठो श्रीमतीसंगनै बस्ने गरेका थिए । दिदी सानो बच्चासंग एक्लै बस्ने गरेको वहिनीले बताइन् । एक्लै बसेकी दिदीलाई सौताले फोन गरेर बोलाएर दुई जना मिलेर दिदीको ज्या’न लिएको वहिनीको भनाई छ । भिनाजुले दिदी माथि नचाहिँदो शंका गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
दिदी माथि त्यस्तो घटना भएपछि मात्र निधन हुनुपूर्व आफुलाई सबै कुरा बताएको वहिनीले सुनाइन् । दिदीले बताएको कुरा सुनाएर वहिनी अन्तरवार्तामै धरधरी रोएकी छन् । वलेरीमा उपचारका लागि राख्दा दिल्ली लगेर उपचार गर उनी ठिक हुन्छिन् भनेर भन्दा पनि पैसा खर्च हुन्छ भनेर उपचार नगराएको बहिनीको आरोप छ । अस्पतालवाट दिल्ली लैजाने भनेर डिस्चार्ज गरेर घर फर्काएर ल्याएको बहिनीले बताइन् । आफ्नो छोरा हेरिदिनु भनेर दिदीले भनेको अन्तिम इच्छा पनि पुरा गर्न नपाएको भन्दै वहिनी धरधरी रोएकी छन् ।
← पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको किताब ‘ट्रेल्स, ट्रेमोर्स एण्ड होप’ सार्वजनिक → The Cartoonz Crew बिस्तारै सबै फुट्नुको भित्री कारण अर्कै रहेछ ! सबिन कार्कीले मुख खोले (हेर्नुहोस भिडियो )